Maamulka Puntland oo weerarkii xalay lagu qaaday xabsiga weyn ee magaalada Bosaaso ku eedeeyey Ururka Al-shabaab |
Maamulka Puntland oo weerarkii xalay lagu qaaday xabsiga weyn ee magaalada Bosaaso ku eedeeyey Ururka Al-shabaab
Sabti, November 09, 2013 — Wasaaradda amniga ee Puntland ayaa ka hadashay weerar xalay lagu qaaday xabsiga Gaal-shire ee magaalada Boosaaso.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee Puntland C/casiis Siciid Gacamey oo maanta shir-jraa’id magaalada Garoowe ku qabtay, ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarka, qaabka uu dhacay iyo weliba cidda geysatey.
Wuxuuna sheegay in weerarka ay soo qaadeen dagaal-yahanno ka tirsan Al-shabaab, kuwaas oo ku hubeysnaa qoryaha darandooriga u dhaca, bumbooyinka gacanta iyo weliba garneylada garabka laga tuuro, islamarkaana ay tiradoodu ahayd inta u dhexeysa 30 ilaa 40 qof.
“xalay saacaddu markay ahayd 10:30 PM, ayaa waxaa soo weeraray xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso rag Al-shabaab ah oo tiradooda lagu qiyaasay 30 ilaa 40 qof, weerarkaas kahor waxay labo bumbo ku tuureen saldhigga booliska ee Biyo-kulule iyo xarunta dowladda hoose” Wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee Puntland ayaa yiri.
Wasiirka oo hadalkiisa sii wata wuxuu mar kale yiri: “ujeedada bumbooyinka loogu tuuray xarunta dowladda hoose iyo saldhigga booliska ee Biyo-kulule, waxay ahayd in ay ciidamada ka mashquuliyaan weerarka ay xabsiga ku qaadeen, si ilaalada xabsigu aysan wax gurmad ah u helin”
Khasaaraha dhanka ciidamada soo gaarey isagoo ka hadlayey wuxuu sheegay in uu yahay dhimashada hal sarkaal iyo dhaawac soo gaarey 4 kale. Sarkaalka dhintay ayaa ahaa taliye ku-xigeenkii xabsiga, sidoo kale saddexda dhaawaca ah waxaa ku jira taliyihii xabsiga.
Inkastoo ujeedada weerarkaas laga lahaa aanu wasiirku carrabaabin, wuxuu hadana sheegay in qalabka ay kooxihii weerarka soo qaaday ka tageen ay kamid yihiin dubbeyaal waaweyn (Burrisyo) , kuwaas oo la rabey in lagu dumiyo gidaarrada iyo albaabbada xabsiga; si loo sii daayo maxaabiista halkaas ku xiran.
Dhinaca kale C/casiis Siciid Gacamey ayaa “waxba kama jiraan” ku tilmaamay, warar laysla dhex marayo oo sheegaya in kooxaha xalay xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso weeraray ay yihiin mileeshiyo beeleed ka caraysan dad dhowaan dil lagu xukumay oo xilligii xukunkaas lagu fulin lahaa uusoo dhowaaday, kuwaas oo doonayey in ay si xoog ah xabsiga maxaabiis ugala baxaan.
Su’aal arrintaas la xiriirta isagoo ka jawaabayey waxaa ereyadiisii kamid ahaa: ” Wararka suuqa iyo waxaasaa la yiri ma soconayaan… weerarkan waxaan ku eedeynay Al-shabaab, iyaga ayaana nasoo weeraray…wararka suuqa ka baxa, waxba kama jiraan”
Ugu dambeyntii wuxuu wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee Puntland sheegay, in kooxihii duulaanka soo qaaday oo xabsiga labo jiho kasoo weeraray ay dhinaca buuraha u carareen, xilliganna ay ciidamada ammaanku ku raad joogaan.
Xaaladda magaalada Boosaaso ayaa maanta ah mid deggen, inkasta oo ay dadku si aad ah u hadal hayaan iska-hor-imaadkii xalay xabsiga weyn ee Gaal-shire ka dahcay ka dhacay, kaas oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan socdeyna muddo hal saac ku dhow.